पानीमा मोबाइल पस्दा के गर्ने ? थाहा पाइराख्नुस्
Nepal Online Patrika विज्ञान र प्रविधि पानीमा मोबाइल पस्दा के गर्ने ? थाहा पाइराख्नुस्
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं। मोबाइल भिजेको वा पानीमा खसेको अवस्थामा सबैभन्दा के गर्ने त ? सबैभन्दा पहिले यदि फोन अन छ भने अफ गरिदिनुहोस् । बन्द गरिसकेपछि कुनै पनि बटन दबाउने वा अन गर्ने कोशिश नगर्नुहोस् । यसो गर्दा फोनमा शर्ट सर्किटको खतरा टर्नेछ ।
यदि तपाईंसँग पुरानो फोन छ र त्यसमा ब्याट्री झिक्न मिल्ने सुविधा छ भने ब्याट्री, मेमोरी कार्ड र सिम कार्डलाई सजिलो गरी निकाल्नुहोस् । यदि फोनमा नन् रिमुभल ब्याट्री छ भने शर्ट हुने खतरा रहिरहन्छ । अब फोनलाई पंखाको मुनी वा हेयर ड्रायर (ब्लोअर) मार्फत सुकाउनु होस् । फोनमा देखिने पानीलाई कपडा वा पेपर न्याप्किनले पुछ्नुहोस् ।
यदि तपाईंसँग हेयर ड्रायर छैन भने फोनलाई सुक्खा चामलको बीचमा राख्नुहोस् । तर चामलको गेडा हेडफोन ज्याकबाट भित्र जानसक्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोस् । यसरी फोनलाई कम्तिमा २४ घण्टासम्म सुक्नका लागि छोडिदिनुहोस् । भिजेको फोन सुकाउने यो नै सबैभन्दा उपयोगी अनि सजिलो उपाय हो ।
अब फोनलाई चामलबाट बाहिर निकालेर अन गर्नुहोस् । यदि फोन अन भएन भने चार्जमा लगाउनुहोस् । त्यसपछि पनि फोन खुलेन भने नजिकैको मोबाइल बनाउने ठाउँमा वा सम्बन्धित सर्भिस सेन्टरमा जानुहोस् ।
एसएमएस फिशिङको डरलाग्दो रूप, जोगिने कसरी ?
ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन प्रक्रिया सर्भरमा समस्या आउँदा रोकियो
अब विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड लिन पाइने
साओमीको नयाँ स्मार्टफोनमा पनि चार्जर नआउने
त्यसपछि संगीत बजारबाट कला हरायो !
भारतमा आजदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु
नागमणि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी एक सेयर गर्नुहोस् भाग्य यसरी चम्किन्छ, पवित्र मनले ॐ लेखी एक लाइक र सेयर गरी हेर्नुहोस् आजको राशीफल
“जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो...
आफ्नी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड उपहार दिने बाबुको यस्ताे अनाैठाे घोषणा!